Dadaallo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameyeen oo ka socda gobolka Mudug | RBC Radio
Dadaallo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameyeen oo ka socda gobolka Mudug
Posted on March 20, 2017 RBC, Wararka
Gaalkacyo (RBC Radio) Dadaallo xoog-leh ayaa ka socda gobolka Mudug,waxaana gurmad joogta ah la gaarsiinaya dadka ay abaaruhu saameyeen ee ku nool gobolka.
Dad badan oo abaarta ka soo barakacay ayaa ku sugan xeryo ku yaalla duleedka magaalada Gaalkacyo,mana jirto gurmad caalami ah oo wali gobolka gaaray.
Laakin waxaa dadaallo iskood ah ka wada magaalada Gaalkacyo iyo deegaannada gobolka Mudug dhallinyarada oo kaashaneysa dugsiyada waxbarashada,maamulka deegaanka iyo qaybaha kale ee dad-weynaha.
“Waxaan qayb ka ahay koox ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo,kuwaas oo diyaar u ah inay wax u qabtaan dadka dhibaateysan,waxaan awoodno waxay tahay bulshada kale inan garsiino dadka dhibaateysan”.Saciid Cabdullaahi Nadaara oo ah suxufi ka howlgalla magaalada Gaalkacyo ayaa sida u sheegay Raxanreeb.
Nadaara wuxuu inta ku darray inay tageen deegaanno badan oo gobolka ka mid ah,iyagoo indhahooda ku soo arkayay dadka ay abaartu saameysay oo u ku sheegay qaarkood inay xaalad liidata ku jireen.
Saciid Nadaara oo lacag ka timid bulshada Soomaaliyeed guddoonsiinaya,maamo Cibaado Muxumad Aadan oo ka mid ah dadka ay abaartu saameysay ee ku nool xeryaha duleedka Gaalkacyo
Wuxuu sheegay inay beegsanayeen dadka saameynta ugu ballaaran abaartu gaarsiisay,asagoo sheegay inuu arkay dad waayeel u badan oo ku xoolo waayay abaarta,waqtiganaa aan heysan wax hanti ah iyo cid kale oo ay caawinaad ka helayaan.
“Maaddama aysan gobolka ka jirin dadaallo caalami ah oo dadka wax loogu qabanayo,waxaan isku dayay annigo saxaafadda iyo baraha bulshada adegsanaya inan dadka Soomaaliyeed usoo bandhigo dadka tabaaleysan,waxbadan ayaa hirgal noqday dad badana nolashooda dib ayay ugu soo noqotay,markii ay caawinaad ka heleen umadda Soomaaliyeed,”ayuu ku darray hadalkiisa.
Saxafiga wuxuu muujiyay in la iloobay gobolka Mudug oo u marka ku sheegay inuu ka mid yahay gobollada ay abaarto saameynta badan ku geysatay,asagoo marka ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in looga bahan-yahay wixii awoodoodda ah inay ku caawiyeen boqollaalka kun ee nolasha adag ku jira,kuwaas oo ay abaarto saameysay.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya dhowaan waxaa ay sheegtay boqollaal ruux abaarta inay u dhinteen,halka tiro inta ka badana ay xilligan la daala-dhacayaan abaarta ka taagan waddanka tan iyo sanadkii 2014.